Distros yevana, vechidiki, chikoro, mitambo, chengetedzo ... | Linux Vakapindwa muropa
MunaFebruary ini ndanga ndichinyunyuta nezve mazana emahara aripo pamusika sezvo zvakawandisa (nemazhinji ma distros ayo akatorwa eanozivikanwa kwazvo) akavhiringidza, asi pane chikamu pakati peaya mazana emadistros ane nzvimbo, ndinoreva iyo themed distros.
Shandisa-yakasarudzika distros inobvumira zvinhu zviviri (zvirinani):
Svitsa zvikamu zvevanhu izvo zvetsika distros zvisinga vhare.
Ita mabasa asina kunyanya kuitwa kana asingakwanise kuitwa nyore neyakajairwa distro
Distros inogadzirwa nemayunivhesiti kana masangano kuzadzikisa zvido zveboka ravo, hurumende yavo, nezvimwe, haawire muboka iri.
Rudzi urwu rwe distro haruna kuvhurika kushoropodzwa mumaonero angu, iwo akanaka kune GNU / Linux uye kubva ipapo zvichienda mberi izvo zvakakosha ndezvekuti inoshandiswa, nehunyanzvi ad-hoc neboka kwairi kunyorerwa uye kana ichifukidza chinodiwa izvo hazvibatwe zvakanyanya pamberi.
Ini ndinokusiira runyorwa rwema distros ayo anonakidza pane izvo zvavanoita, mamwe anozivikanwa, mamwe kwete zvakanyanya (zvirokwazvo ivo vanopfuura nemaoko aLaura):
Qimo: Unofanira kunge wakaverenga nezvazvo kunze kwekunge iwe wakatemerwa chaizvo, distro kunyanya yakagadzirirwa vanaZvikasadaro, vana vadiki, vane makore matatu zvichikwira. Iyo yakavakirwa paUbuntu uye iri chaizvo yakafanana distro ine interface yakanyatsogadzirirwa ivo uye nemitambo yakawanda yakabatanidzwa yekudzidzisa.
ArtistX: Iyo distro yakagadzirirwa yeunyanzvi mune zveseIcho hachisiwo chimwe chinhu chakanyanya kuve Ubuntu saQimo. Inomhanya paKDE kana GNOME uye inotorwa neDVD ine zvese zvirongwa zvemifananidzo, ese ma2D uye 3D, ese edhiyo edhisheni, ese evhidhiyo edhita, vese vezvenhau vatambi, chero chinhu chine hukama nemultimedia chirimo muDVD. Iyo distro iyo Esty aigona kuramba akatarisa.
SuperGrubDisk: Zvichida N @ ty xD's inodiwa distro, yakanyatsogadzirirwa kugadzirisa matambudziko ebhutsu Kubva paPC, kunyanya avo vanoshandisa kana vanoshandisa Windows neLinux pamwechete, SuperGrubDisk ndiye muyananisi mukuru.
Damn Inotambura Linux: Vanotambura? Hongu hongu, iyo distro yakagadzirirwa kuchengetedza, asi kwete kuti iwe uiise asi iwe kuti iwe uidzidze, zvakaitirwa nemaune kutadza ingoona kusagadzikana, tamba nayo, gadzirisa zvikanganiso zvayo, nezvimwe, uye kana zita racho rikarira senge imwe distro, imhaka yekuti vakaigadzira kubva Damn Diki Linux (iyo yaimboonekwa sediki pasi rose).
Akaparadzaniswa Mashiripiti: Sezvo ini ndanga ndichikuudza nezve SuperGrubDisk uye matambudziko ekutanga, kune matambudziko ekuparadzanisa, zviri pachena kuti hatigone kugadzirisa dambudziko rekuparadzanisa kubva pachikamu chimwe chete, saka kana tisina chimwe chishandiso mune chimwe chikamu kana isu tisingakwanise kuchishandisa chero chikonzero, isu takagovana Mashiripiti izvo. Chinhu chinotyisa kupfuura chimwe uye kuti pamwe isu tese tinofanirwa kuve nacho. Iyo inogona kuzadzikisa iro basa re SuperGrubDisk.
Sayenzi Linux: Hatina kukanganwa iyo sainzi distro par kugona. Kunyanya yakagadzirirwa iyo basa redzidzo Yakagadzirirwa kushanda pasina kuoma paavhareji Hardware, kunyangwe iine desktop mhedzisiro, maapplication ainayo mukuwedzera kune akajairwa iwo ekushandisa desktop, ane zvirongwa zvesainzi izvo vamwe vanhu vangangodaro vasingadi nguva dzose, zvese zviri mukati mekugona kwekubata ruoko. graphical interface munzira ye «Inotevera, inotevera». Yakagadzirwa naCERN (Switzerland / Europe) uye Fermilab (USA) pamwechete, yakavakirwa paRed Hat. Sezvauri kuona, zvese zvakagadzirwa nenzira yakajairwa kuti usapedze nguva.
Edubuntu: Ndiko kuti ini handikwanise kusiya iyi distro yanzwikwa asi yazvo zvimwe hatizive zvakawanda kana tisiri munzvimbo ye dzidzo. Yakagadzirirwa kushanda mumambure uye kushandisa ese software yekudzidzisa yakapihwa neFree Software, ichiwana zvese izvi pasina kuda "kufonera komputa" kune zvese, zvakare nemukana wekushanda neLTSP inokutendera kuti Linux pamichina ine mwero kwazvo (senge izvo zvinowanzovapo muzvikoro).
Linux Gamers: Iyo liveDVD distro yekutamba, kana mumwe munhu akakuudza kuti Linux haina mitambo, ivo vanomupa demo reLinux Gamers uye vovhara miromo yavo: D. Zvimwe zvekuvandudza zvinorasikirwa mu distro pachayo nekuti yazvino vhezheni iri kubva munaGunyana 2008 kusvika musi wechinyorwa chino.
Ini ndinofunga kuti neizvi isu takaedza zvakakwana zvakasarudzika distros kuti tiwane zano rakanaka, kunyangwe paine zvimwe zvandisina kuratidza nekuda kwekushaya nguva, vamwe vari mune iyi kusangana uye iwe unogona kuenderera uchitsvaga paInternet.
Wakaedza chero eaya ma distros?
Iwe unoziva chero chawakafarira zvakanyanya uye hausi pano?
La imagen ndezva zaxl4 uye sezvazviri nguva dzose muzvinyorwa zvangu zvazviri Creative Commons
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Distros yezvimwe zviitiko zvaunofanira kuziva nezvazvo
BackTrack parizvino iri beta v4 uye iri distro yehurongwa uye network kuongororwa. Zvichida zvakanakisa, izvo zvinosanganiswa nevasina kusimba Linux ndiyo nzira yakanaka yekudzidza: D.
Ndakaziva kuti vaizomutumidza zita rekuti hehe
Ophcrack !! lol
Kubva pane rondedzero ini ndakangoshandisa Parted Mashiripiti, uye ndeyekuti iyo distros yekushandisa "zvakajairika" inowanzove iine zvimwe zvezvinhu izvozvo (zviri pachena kuiisa xD).
Ophcrack ndeyekutsemura windows mapassword uye sezvawakamboona ini ndakakanganwa zvachose password yekukunda vista… (angave akanaka masystem admin ini ndingave ndiri ... XD)
Uye zvakanaka, pane Wifislax, yandisingashandise, hehehe… Ndine yangu wifi… :)
Iyo yakasarudzika distro zvakare yakatarisana nenyika yemimhanzi inonzi Musix GNU + Linux. Iyo ine yakazara zvakakwana suite yehunyanzvi zvirongwa zvekugadzira uye kugadzirisa kweodhiyo vhidhiyo uye kunyangwe mifananidzo. Yakakurudzirwa zvakanyanya uye chimwe chinhu chinonyanya kufarira ndechekuti iyo disctro iri zvachose muchiSpanish nerubatsiro nekuti ndinofunga zvinoitwa pano muSouth America kana ndisina kukanganisa.
Ndine dvl asi ini handisati ndaishandisa zvakanyanya, ndaifarira super grub disk kunyangwe yaive isiri mhinduro yedambudziko rangu
Ndiri kudzika pmagic kuitira kana pane imwe nguva ini ndichiida
Ndakaisa ipcops dzinoverengeka dzakasiya kuravira kwakanaka kwazvo mumuromo mangu uye ndakaedzawo openfiler ye laboratori ine mhedzisiro inofadza.
HAUGONI KUVA !!!
VAKAPONESA «ESUN Linux»
Zvinoshamisa kuti havana kuzviisa !!!!!
(Icho chitsva, chema20 kurodha pasi papeji rako, nekuti izvozvi chinogona kutengwa mumagazini yeXD)
Iyo yakagadzirwa neYunivhesiti yeTarapacá (muChilito)
Ona zvinotaurwa nechinyorwa zvakajeka: Distros inogadzirwa nemayunivhesiti kana masangano kuzadzikisa zvido zveboka ravo, hurumende yavo, nezvimwe, haawire muboka iri.
Ndokunge, tsika distros haisi chikamu chechinyorwa chino uye ndechipi chinhu chekutanga chandinowana mune yako link? (kubva pawebhusaiti yepamutemo):
Kuteedzerwa kweyakajairika Linux system kuESUN UTA
Mune mamwe mazwi, yakagadzirirwa kuve fakaroti distro, ndicho chinangwa chayo uye zviri pachena kuve yemahara software vanoiburitsa.
Izvo zvichiri kunakidza asi… iwe waifanira kunge wakaverenga chinyorwa zviri nani, ini ndakataurawo zvakajeka kuti haazi ese ma distros aizove ari pachinyorwa (ini ndinowana kupi nguva yekuisa zvese zviripo).
Kwaziso uye ini handina kumhanyisa kudaro xD
Kutaura kumwe chete kwandakaita pachiitiko chakapfuura pamusoro pekugovera kwakawanda ...
zvakanaka…: D ndine urombo :)
PS: isa dzimwe tsoko ¬¬
idzi tsoko shoma dzinobvumira yakaderera kwazvo mhando yekutaura uye kumanikidza yakafara verbiage, izvo zvinogumbura ¬¬
Ini pachezvangu ndinofinhwa neaya madhiri distros ...
Zvingave zvirinani kana vakagadzira yakakosha repository, uye vogovera script (.sh) yekuisa ese maXD mapakeji. Ini handisi kuwana chikonzero nei vachiita distro nezvirongwa zveX kana vachigona kuita repository server uye nekuisa zvirongwa ivo vanoda ... ipapo chero munhu anoda kurodha pasi zvese, anobvisa (kwechinguva) imwe zororo kubva kune zvinyorwa.list uye anosiya imwe chete, uye anoita inozivikanwa "aptitude install *" uye voila! munhu wese anofara
Ini handizive kana SuperGrubDisk inogona kutarisirwa sekugovera. Sezvo ini ndinozvinzwisisa, ingori mashiripiti Grub kuti panzvimbo yekushandiswa kusimudza anoshanda system, iyo inoshandiswa kuteedzera yekudzosa mirairo kubva kune mamwe maGrubes.
@Sergio akayambuka SuperGrubDisk nekuda kwekutaura kwako uye kuti ini handina kuwana chero chinhu chinoratidza zvimwe, ndatenda zvikuru
Chokwadi, Super Grub Disk haisi kugoverwa kweLinux, chero zvodii kungave kugoverwa kweGNU, kunyangwe iko kugovera kuchine chirongwa chimwe chete chechokwadi hachisi.
Vanhu vazhinji vanozviti live cd uye izvi hazvina kunaka sekureba sezvavanoreva linux live cd. Zvikasadaro zvingave zviri chaizvo.
Ndinovimba mumakore mashoma iwe unogona kuwedzera Rescatux kune urwu runyorwa. Izvi zvaizoreva kuti ini ndanga ndakwanisa kushanduka seye programmer.
Pindura kuna adrian15
Uye iyo distro yekuisa pamwechete mapuzzle? Iwe unoziva, iyo iri pamufananidzo!
lesli paola akadaro
Mhoroi, mumwe munhu, ndinoda kukupai email
uye ndinovapa zvavanoda
Pindura kuna lesli paola
Uvazquez (Ubuntero) akadaro
Edubuntu aida kuiisa muchikoro changu chekare chepuraimari asi havana kunditendera nekuti "windows inowanikwa" (uye vane windows 3, mazhinji mafomu anoenda neDOS). Zvakanaka vanozvipotsa = (
Pindura uvazquez (Ubuntero)
Alejo Jimenez Santana akadaro
dunhu rakafanana q chaiyo kugoverwa?
Pindura kuna Alejo Jiménez Santana
Anenge mazana maviri mbiru